Ny lahatsoratr'i Alicia Navarro momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Alicia Navarro
Alicia Navarro dia CEO sy mpiara-manorina Skimlinks, sehatra fanangonam-bola amin'ny atiny izay manampy ny tranokala hahazo valisoa noho ny fikasana hividy noforonina tao anaty atiny. Talohan'ny nanombohany ny Skimlinks dia niasa nandritra ny 10 taona mahery izy tamin'ny famolavolana sy fandefasana ireo fampiharana miorina amin'ny Internet sy finday any Aostralia sy UK. Hatramin'ny 2007, Alicia dia nampitombo ny orinasa ho an'ny mpiasa mihoatra ny 85 manerana ny birao any London, San Francisco ary New York City.
Lisitry ny mpanome data Skimlinks Data - Mametraka fanontaniana mety
Talata, Martsa 15, 2016 Alicia Navarro
Hatramin'izao, ireo mpivarotra dizitaly sy ireo matihanina momba ny masoivoho dokambarotra izay nikasa ny hanao doka programmatic dia niatrika ny tranga data data box. Ny ankamaroany dia tsy injeniera na mpahay siansa momba ny angon-drakitra, ary tsy maintsy nitaky finoana haingana izy ireo ary natoky ny filazan'ny mpamatsy angon-drakitra momba ny kalitaon'ny data, ny famerenana ny valiny aorian'ny fampiharana - ary rehefa vita ny fividianana. Fa inona no tokony hotadiavin'ny mpivarotra sy ny masoivoho amin'ny mpanome data? Ahoana no ahafahan'izy ireo mamaritra izay